China Gelatin 250 Bloom ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-Xiamen Gelken inganikeza nge-gelatin kusuka ekuqhakaleni okungu-80 kuye ekuqhakaleni okungama-280
Ngokwamandla we-Jelly we-gelatin, i-gelatine ingahlukaniswa ibe ukuqhakaza okungama-80 kuye ekuqhakaleni okungama-280 njengoba kungezansi:
Gelaitn 80 ukuqhakaza, ijwayele ukusetshenziselwa izinsini zewayini
Gelaitn 100 ukuqhakaza, ingasetshenziswa kumaswidi ahlafunwayo
Gelaitn 120 ukuqhakaza, isetshenziselwa ukuhlafuna izithelo
Ukuqhakaza kwe-Gelaitn 140, ingasetshenziswa kumathofi
Gelaitn 150 ukuqhakaza, ijwayele ukusetshenziswa ku-Nougat
Gelaitn 160 ukuqhakaza, isetshenziswa kakhulu kuma-Ice Creams
Gelaitn 180 ukuqhakaza, ingasetshenziswa kuma-Aspics
Gelaitn 200 ukuqhakaza, isetshenziswa eHams
Ukuqhakaza kweGelaitn 220, ivame ukusetshenziswa kumaPies
Gelaitn 240 ukuqhakaza, lisetshenziswa ePates
Gelaitn 250 iqhakaza, isetshenziswa enyameni ekheniwe
Gelaitn 260 ukuqhakaza, ingasetshenziswa enyameni ephekiwe efriziwe
Gelaitn 280 ukuqhakaza, ivame ukusetshenziswa enkomeni yenkomo
Ukubonakala okuphezulu kweGelatin inganikeza ukungezwani okuphezulu nokuqina.
Ukukhethwa ngokucophelela kwezinto zokusetshenziswa zokukhiqizwa kwe-gelatin kuyisisekelo seGelken ukuqinisekisa ukuphepha komkhiqizo nekhwalithi. Abakhiqizi beGelken gelatin basebenzisa izingulube, izinkomo nezinhlanzi ezinempilo njengezinto zokusetshenziswa. Sikhiqiza ngokuhambisana ngokuqinile nezindinganiso ze-ISO namanye amazinga wekhwalithi ephezulu ahlobene nokuphepha kokudla namazinga we-GMP. Ngobuchwepheshe bayo bokukhiqiza obuphezulu kanye nohlelo lokulawula ikhwalithi esezingeni laseYurophu, iGelken izuze ukukhiqizwa komkhiqizo osezingeni eliphakeme
Izinto zokusetshenziswa ezivunyiwe kuphela ezingasetshenziswa ngabantu ezingasetshenziswa ekukhiqizeni i-Jiekang gelatin. Ngamanye amagama, abathengi benyama abathenga bavela emthonjeni ofanayo wezilwane onempilo njengokusetshenzisiwe ukwenza i-gelatin. Ngakho-ke, i-gelatin edliwayo ihlangabezana nezimfuneko zemithetho edliwayo ye-gelatin futhi ihambisana nemithetho yokudla.
UGelken uyaphikelela ekusebenziseni izixazululo zemvelo, ulwela ukupheleliswa kuzo zonke izici futhi uphikelela nsuku zonke ukuze abone umbono wethu "wokuqhubeka nokwenza ngcono izinga lempilo".
Singochwepheshe ku-gelatin, collagen kanye ne-collagen peptides. Lezi zithako, ezingokwemvelo, ezimsulwa, ezingezona ezomzimba futhi ezihlangabezana nezindinganiso zelebula ezihlanzekile, zibamba iqhaza elibalulekile ekudleni okuseqophelweni eliphezulu, empilweni enempilo nasekuqaliseni ubuchwepheshe.
Langaphambilini I-Gelatin 40 Mesh
Olandelayo: I-Gelatin Ye-Gummy Candy